Home » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Nosy Cayman: Fanavaozana ny fizahan-tany ofisialy COVID-19
Nanomboka ny herinandro tamina fanamarihana feno fanantenana, ny mpitarika ny Nosy Cayman dia nandray ny valiny "tsy misy tsara" nambara androany ary nanamarika fa raha mitohy ny valiny mitovy amin'izany mandritra ity herinandro ity, dia azo atao atsy ho atsy ny fanalefahana voafetra ny fepetra ao amin'ny Shelter in Place. Ity no Vaovao farany momba ny fizahan-tany COVID-19 an'ny Nosy Cayman efa niandry ny rehetra.
Nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety omaly (Alatsinainy 27 aprily 2020) dia notarihin'ny pasitera DA Clarke avy amin'ny Fikambanana Pastora.
Manantena ny mpitarika an'i Cayman fa amin'ny fitomboan'ny fitiliana mba hahitana ny fihanaky ny aretina amin'ny fiarahamonina dia afaka mandray fanapahan-kevitra haingana izy ireo mba hialana sasatra amin'ny fetra henjana napetraky ny vondrom-piarahamonina Cayman Islands hiady amin'ny COVID-19.
Ny fanamafisan'ny governemanta dia mitohy ny fanafoanana ireo fampitana avy amin'ny vondrom-piarahamonina ary ny fahombiazana eto dia hitarika ny fanapahan-kevitra amin'ny fialan-tsasatra amin'ny fialofana amin'ny fameperana toerana.
Lehiben'ny mpitsabo, Dr. John Lee nitatitra:
Tsy nisy valiny tsara ary 208 ny valiny ratsy androany.
Ny fitambaran'isa dia mijanona amin'ny 70 izay ahitàna tranga 22 simptomatika, fidirana hopitaly dimy - telo ao amin'ny Health Services Authority ary roa ao amin'ny Health City Cayman Islands, tsy misy na dia iray aza amin'ny ventilator ary 10 no sitrana tanteraka.
Nahatratra 1,148 XNUMX no notsapaina, anisan'izany ny santionany fitiliana.
Fomba hafa azo raisina ho an'ny Nosy rahavavy izay nitokana tamina tranga iray tsara ary aiza no hamaranana ny fitiliana amin'ity herinandro ity. Ny governemanta dia mety ho afaka miala sasatra amin'ny famerana an'i Little Cayman sy Cayman Brac mialoha ny amin'ny Grand Cayman, raha tsy misy porofo milaza ny COVID-19 any amin'ireo Nosy rahavavy.
Ny sarontava dia manan-danja amin'ny fisorohana ny COVID-19 rehefa ampiasaina miaraka amina protokolfa ilaina hafa ao anatin'izany ny fanasana tanana sy ny fampiharana ny elanelana ara-tsosialy.
Nangataka olona izy mba hisaron-tava, raha azon'izy ireo atao izany, rehefa mifindra amin'ny toerana be olona izy.
Na dia tsy misy tanjona kendrena amin'izao aza ny isan'ny fitiliana hataon'ny laboratoara ao amin'ny Health Services Authority (HSA) sy ny Hopitaly Doktor, dia manana ny fahafahany manao 1,000 isan-kerinandro izy ireo.
Premier, Hon. Alden McLaughlin nanao hoe:
Niarahaba ho “vaovao mahafaly” i Premier tamin'ny valiny ratsy 208 voaray androany nefa nampitandrina izy fa "tsy azo entina mivoaka isika" amin'ity fampahalalana ity.
Misy santionany 500-600 amin'ny fizotran'ny fanandramana ary raha tsy naneho valiny tsara izany sy ny fitiliana ambaratonga lehibe kokoa dia misy ny antony antenaina fa tsy hanana fifindran'ny vondrom-piarahamonina malalaka ny Nosy Cayman.
Na dia andrasana aza ny vokatra tsara avy amin'ny tsirairay avy amin'ny valin'ny fitsapana lehibe kokoa, ny Nosy Cayman dia hanohy hiasa amin'ny fanafoanana ny aretina, mifanohitra amin'ny famongorana, mitovy amin'ny fomba fiasa New Zealand amin'ny krizy.
Ny tranga isam-batan'olona dia azo fantarina haingana, avy eo atokany ary omena fahasalamana haingana ireo mila fanampiana mba tsy hisy fifindran'ny vondrom-piarahamonina avy amin'ny lafy tsarany.
Manerantany, ireo izay nisokatra haingana loatra dia voatery namerina ny fepetra famerana toy ny curfews. "Tapa-kevitra izahay ny tsy hamela izany hitranga eto - ary ho very ny tombony tamin'ny volana fanaovana sorona farany."
Ny governemanta dia manana drafitra hisokatra indray izay hodinihina sy hodinihina ao amin'ny Caucus ary avy eo ny Kabinetra hanampy amin'ny famaritana ireo dingana amin'ny famotsorana ireo fameperana.
Raha hikatona ny sisintanin'i Little Cayman ary tsy misy tranga hita ao dia azo ambara fa afaka COVID-19 ilay nosy. Toy izany koa, ao amin'ny Cayman Brac, na dia betsaka kokoa aza ny mponina ao aminy, dia azo atao tsara ny manena ny fihanaky ny fiarahamonina.
Ao amin'ny Grand Cayman, dia haharitra kokoa izany. Miaraka amin'ny famerana ny toeram-ponenana dia tapitra ny zoma 1 mey, raha toa ka mamporisika ny valin'ny fitsapana mandritra ny herinandro sisa, ny governemanta dia afaka manova ny toeram-pialofana amin'ny famerana toerana efa napetraka. Mandeha ny famakafakana mba hamaritana izay faritra misy ny hetsika sy ireo vondrona ao amin'ny fiarahamonina izay tsy misy atahorana ny famindrana ny vondrom-piarahamonina.
Ny serivisy paositra dia misokatra amin'ny fomba voafetra manomboka amin'ny Alarobia 29 aprily, ao anatin'izany ny fanokafana ny toeran'ny paositra iray amin'ireo nosy telo ary koa ny fandaminana ny mailaka rehetra voaray sy ny fandefasana amin'ny boaty paositra tsirairay any amin'ny paositra.
Toa mety hikatona ny indostrian'ny fizahantany mandritra ity taona ity.
Mikasika ny fandoavam-bola fisotroan-dronono dia nilaza ny praiminisitra McLaughlin fa tokony hanan-kery ao anatin'ny fotoana fohy ny lalàna. Ireo mpandray, raha ekena, dia afaka manantena ny hahazo ny fandoavam-bola ao anatin'ny 45 andro aorian'ny fanaovana ny fangatahany. Taorian'ny fangatahana natao ho an'ireo mpanome fisotroan-drononon'olona mahita ny fandoavam-bola avy amin'ny fandraisana anjaran'izy ireo dia nilaza izy fa tokony hanaiky ny fahazoana ny fangatahana ao anatin'ny fito andro ireo mpanome tolotra, manapa-kevitra momba ny fangatahana ao anatin'ny 14 andro aorian'izay ary manome vola raha ekena, ao anatin'ny 45 andro avokoa. .
Ny iray amin'ireo voalohany nahazo alalana hisokatra indray, rehefa maivana ny fameperana, dia ireo orinasa manadio dobo.
Ny fandrarana fampiasana amoron-dranomasina dia mety hitohy atsy ho atsy.
Nisaotra an'i Fosters izy noho ny fanomezana finday ho an'ireo zokiolona amin'ny fikarakarana fonenana hahafahan'izy ireo mifandray amin'ny fianakaviany.
Ny fiandohan'ny herinandro ho avy izao dia hiainga ny sidina mankany La Ceiba, Honduras.
Namporisihiny ny Caymanians any amin'ny Nosy Bay izay mety maniry hiverina any amin'ny Nosy Cayman amin'ny alàlan'ny sidina La Ceiba miverina fa tsy afaka mankany La Ceiba hifandray amin'ny www.emergencytravel.ky mba hananan'ny biraony hevitra isa ary afaka hifampiresaka amin'ireo manampahefana Honduras.
Ireo izay mandeha mankany La Ceiba dia tokony hitondra taratasy fanamarinana nomen'ny dokotera fa afaka COVID-19 izy ireo avela hiditra ao Honduras avy amin'ny manampahefana ao amin'io firenena io.
Ny sidina toy izany, raha misy ny fangatahana dia azo andrana indray. Ny biraony dia afaka nanampy tamin'ny fepetra takiana diplomatika mba hanamorana.
Caymanians vitsivitsy sy mpihazona PR vitsivitsy no ho tonga amin'ny alàlan'ny sidina miverina avy any Honduras ary hiditra amin'ny fitokana-monina 14 andro tsy maintsy atao ao amin'ny tranokalan'ny governemanta.
Ny sidina iray mankany Mexico izao dia kasaina hatao ny zoma 1 mey ho an'ny Meksikana nankatoavin'ny governemanta Mexico ary ny Cayman Airways dia hifandray amin'izy ireo mivantana.
Ny sidina BA airbridge talata izao dia feno. Maromaro amin'ireo miandry ny hiainga, ao anatin'izany ny filipiana 40, no hiala amin'ny sidina.
Ny sidina mankany Miami, amin'ny 1 Mey, dia feno ihany koa.
Ny satan'asa tsy miankina iray any Canada izay mamela ny alàlan'ny biby fiompy dia karakarain'ny olona tsy miankina amin'ny vidiny 1,300 dolara Kanadiana isaky ny tapakila. Homena amin'ny antsipirihany ireo lahatsoratry ny media sosialin'ny Governora.
Ny sidina mankany Costa Rica sy ny Repoblika Dominikanina dia antenaina hambara amin'ny herinandro ambony.
Nisaotra ny Consul Honorary izy, ary koa ny rehetra ao amin'ny Cayman Airways sy ny manampahefana eo amin'ny seranam-piaramanidina noho ny asany tamin'io lafiny io.
Ny vola voarindra amin'ny sehatra tsy miankina izay antenaina hambara dia mety hanampy ireo mila fanampiana ara-bola amin'ny fidirana sidina.
Raha misy ny fangatahana fanampiny dia hanenjika sidina fanampiny. Namporisihiny ny rehetra hampiasa ny takelaka an-tserasera mba hanome ny antsipirihany fa tsy amin'ny telefaona.
Namporisihiny ireo maniry hiala ao anatin'ny andro ho avy handefa mailaka [email voaaro] hiantohana ny biraon'ny governora hahafantatra tanteraka ny fangatahana sidina ho avy.
Minisitry ny fahasalamana, Hon. Dwayne Seymour nanao hoe:
Ny Minisitra dia nanao antsoantso ho an'ny Dart Organization noho ny asany rehetra nandritra izany fotoana izany.
Nanambara izy fa misy Banky Rà faharoa izay efa misy ao amin'ny Red Cross HQ ao amin'ny Huldah Avenue, izay nahazo ny fanomezana voalohany tamin'ny herinandro lasa. Misokatra ny alakamisy ny trano manomboka amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 3 hariva. Ho an'ny fotoana fanendrena hanome ra, mifanerasera www.bloodbank.ky na antsoy ny 244-2674. Ny singa voalohany amin'ny Banky Rà dia ao amin'ny HSA. Ireo izay narary tato ho ato dia tsy afaka manome mandritra ny tapa-bolana.
Nisaotra ny Davenport Development izy satria nanome saron-tava 7,000 ho an'ny HSA.
Nankasitraka ny programa Faharoa Faharoa izay manampy ireo meloka hiaraka amin'ny fiarahamonina izy ary nanamarika fa ny roa amin'ireo fandaharam-pianarana dia nampifandraisina tamim-pahombiazana tamin'ny mpiasan'ny Sampan-draharahan'ny Fahasalamana momba ny tontolo iainana ary miasa tsara amin'ny asany izy ireo.
Nasongadiny ny fepetra takiana amin'ny DEH amin'ny famoahana ireo fitaovana fiarovana COVID 19, indrindra fa ny saron-tava sy fonon-tànana araka ny tokony ho izy.
Niantsoantso tamin'ny ankizy sy ny mpianatra manao ny fianarany koa izy ary manampy ny ray aman-dreniny ao an-trano.
Trano fandraisam-bahiny any Trinidad sy Tobago no mahazo tombony amin'ny fanampiana avy amin'ny governemanta
Ireo fikambanana mpitsangatsangana any Amerika Avaratra dia manana fanantenana amin'ny fahasitranana COVID-19